Alwaaxdii bannaanka soo dhigtay ayaa jikadaada ku soo kordhisa dabeecad | Bezzia
Alwaaxyada qarsoon waxay ku daraan jikadaaga dabeecad
Maria vazquez | 17/06/2022 18:00 | Qurxinta qurxinta
Waxaa jira walxo ay ka mid yihiin alwaaxyo qaawan oo waxay leeyihiin joogitaan weyn oo meel kasta ku yeel qofnimo weyn. Jikada badanaa waa mid ka mid ah kuwa la doortay oo ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan marka lagu daro walxahan. Haddii kale, fiiri soo jeedinta aan maanta kula wadaagno.
Alwaaxda iyo alwaaxyada la taaban karo labadaba jikada ku dar dabeecad. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka lagu helay mid iyo kan kale aad bay u kala duwan yihiin. Iyadoo alwaaxyada alwaaxdu ay ku daraan tayada iyo rusticity meel bannaan, kuwa la taaban karo waxay ku ciyaaraan barta qallafsan ee warshadaha.
Qaab noocee ah ayaad rabtaa inaad siiso jikadaada? Waxaad ku xoojin kartaa qaabkaas adigoo ku daraya walxaha dhismaha kuwan oo kale ah ama, isticmaal faahfaahinta asalka ah ee guriga sida alwaaxyada si aad u qaabayso jikadaada oo aad naftaada u ogolaato in ay hagaan walxahan. Waa laba hab oo kala duwan oo wax loo jilo oo labaduba waa sax.
1 Alwaaxyo alwaax ah oo bannaan
1.1 Jawiga deggan
1.2 cusub iyo hadda
1.3 Faahfaahin yar
2 alwaaxyada shubka ah ee soo ifbaxay
Alwaaxyo alwaax ah oo bannaan
Alwaaxda daboolan ayaa ah kuwa ugu caansan jikada. Oo nagama yaabin, sababtoo ah waxay ku siinayaan kuwan taabasho diiran taas oo ka dhigaysa qolkan mid aad u fiican. Waxayna tahay in marka jikada ay noqoto xarunta neerfaha ee guriga, marka waqti badan lagu bixiyo marka loo eego kuwa kale, waxaa muhiim ah in ay noqoto meel diiran.
diiran had iyo jeer macnaheedu maaha rustic, in kastoo ay noqon karto. saqafka alwaaxda wax-ka-qabashada dabiiciga ah si kor loogu qaado rusticity-ga jikada. Gaar ahaan kuwa ay alwaaxyada alwaaxdu muujinayaan dhamaystirka qaabaynta wakhtiga.
Qoryaha mugdiga ah iyo in ka badan waa ku filan, in ka badan waxay xoojin doontaa qaabka rustic ee jikada. Ma aha dhammaan jikada leh saqafka noocan oo kale ah, si kastaba ha ahaatee, waxay raadiyaan inay xoojiyaan qaabkan. Laydhka rusticka ah ee tooska ah oo leh dhar isku mid ah ayaa ku habboon qurxinta jikooyinka casriga ah iyo avant-garde.
cusub iyo hadda
Alwaaxyo leh geeso nadiif ah iyo cod dhexdhexaad ah marka la dhigo saqafka cad oo masaafo aad u fog midba midka kale, waxay keenayaan cusub oo cusub jikada. Saqafka ayaa neefsanaya oo alwaaxdu waxay sii wadaan inay siiyan diirimaadka jikada laakiin qaab casri ah.
Haddii aad raadinayso jikada casriga ah, dhalaalaya oo diirran, sharad ku dheji alwaaxa noocaan ah iyo qaabeynta. Uma baahnid, marka lagu daro, inay yihiin alwaaxyo adag. Maanta waxaa jira alwaaxyo godan iyo agabka qoryo ku dayanaya si guul leh oo hoos u dhigta qiimaha,
Haddii aadan rabin inaad dhejiso alwaax saqafka sare ah laakiin aadan rabin inaad ka baxdo jawiga ay ku bixiyaan jikada, u isticmaal meelo gaar ah sida ka muuqata sawirka soo socda. Waxaan u jecelnahay iyaga oo ah qalab loogu talagalay meelo kala sooc muuqaal ahaan: jikada qolka cuntada, goobta jikada...
alwaaxyada shubka ah ee soo ifbaxay
Alwaaxyada la taaban karo ayaa caan noqday tobankii sano ee la soo dhaafay. Kor u kaca qaabka warshadaha way u roonaatay oo maanta waxaa jira qaar badan oo dib u habeyn ku barya si ay u helaan iftiin noocan oo kale ah oo ay nadiifiyaan oo ka tagaan indhaha. Oo aan la dafiri karin in ay dabeecad iyo wax badan ku soo kordhiyaan guriga.
Dhuxul la taaban karo looma isticmaalo sida alwaaxyada alwaax, inkastoo laga abuuri karo xoq, sida walxaha qurxinta, Caadiyan saf uma galaan. Waxaa laga taxadarayaa in ay u muuqato in ay weligood joogeen, in ay halkaas joogaan sababtoo ah qaab dhismeed ahaan ayaa loo baahan yahay. Sidaa darteed, waxa caadiga ah waa inay ka gudbaan jikada oo ay ku nastaan ​​hal ama dhowr tiir oo isku mid ah.
Waxay si fiican ugu habboon yihiin Jikada warshadaha, laakiin ma aha oo kaliya kuwan. Sida aad ku arki karto sawirada, dhammaan madbakhyada soo bandhigay alwaaxyada shubka ah waxay leeyihiin qaabab aad u kala duwan. Qaarkood waxay leeyihiin dhiirigelin gaar ah, qaar kalena waxay ku sharxayaan walxaha qadiimiga ah iyo sidoo kale kuwa iyaga u taagan bilicsanaanta
Nooc noocee ah ayaad jeceshahay sida ugu fiican si aad ugu daabacdo shakhsiyadda jikada? Sideed u isticmaali lahayd? Waxaan rajeyneynaa in sawiradu ay kugu dhiiri galiyeen inaad ka jawaabto su'aalahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Alwaaxyada qarsoon waxay ku daraan jikadaaga dabeecad
Shuruudda waxbarashada carruurta
San Fermin ee Navarrese